काठमाडौँ । काठमाडौँको मुटुमा रहेको रानीपोखरी पुनःनिर्माण कार्यमा जुट्दै भक्तपुरका स्थानीय मजदूर । गत फागुनको शिवरात्रिका दिनदेखि पुनःनिर्माण शुरु भएको पोखरीमा हरेक दिन ५० भन्दाबढी मजदूरले काम गर्दै आएका छन् । पोखरीमा काम गर्ने दक्ष कामदार (डकर्मी)लाई प्रतिदिन रु. एक हजार ४०० र अन्य कामदारलाई रु. एक हजार ज्याला प्रदान गरिएको छ । तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ